Mar haddii aad badbaado mar walbo badbaado ayaa tahay?
Su’aal: Mar haddii aad badbaado mar walbo badbaado ayaa tahay?
Jawaab: Marka uu qofka badbaado yahay mar walba miyay badbaadsanyihiin? Marka dadka ay u bartaan Ciise sida Badbaadiyaha, waxaa xiriir la la yeeshiyaa Illaah ee u siinayo badbaadadooda sida amni. Dhoor mareeno ee Baybalka wuxuu ku dhawaaqay xaqiiqdaan.
(a) Rooma 8:30 wuxuu ku dhawaaqay, "Iyo kuwa uu qadaray, sidoo kale wuu u wacay; kuwa uu u wacay, sidoo kale wuu ka cudurdaartay; kuwa ka cudur daartay, Wuxuu sidoo kale ammaanay." Aayadaan waxay noo sheegeysaa xiliga Illaah na doorto, waa sida haddii nalaku ammaanay Joogitaankiisa ee janada. Ma jiraan ka hortagi karo aaminaha ee hal maalin oo la ammaano sababtoo ah Illaah ujeedo ayuu u leeyahay janada. Markii qofka cudurdaarto, badbaadadiisa waa dammaanad - wuxuu badbaado u yahay haddii marhore lagu ammaanay janada.
(b) Bawlos wuxuu weydiiyay labo su'aalo adag ee Romans 8:33-34 "Ee keenayo eedeyn walba ee ka soo horjeedo kuwa Illah doortay? Waa Illaah cida tusto. Waa kuma cida cambaareysay? Ciise Masiixi, oo dhintay wax ka badan m kidaas, yaa oo nooleeyo nolosha - wuxuu ku jira gacanta midig ee Illaah iyo sidoo kale wuu noo doodayaa inaga." Yaa keenayo eedeynta ka soohOrjeedo doorashada Illaah? Ma jiro qofna, sababtoo ah Masiixi waa noo doodaheena. Yaa na cambaareynaya? Ma jiro qof, sababtioo ah Masiixi, Midka inaga noo dhintay, waa midika caMbaareeyay. Waxaan leenahay labadaba u doodaha iyo garsooraha sida Badbaadiyaheena.
(c) Aaminayaasha mar labaad ayay dhashaan (la cusbooneysiiyay) marka ay aaminsanyihiin (Yooxanaa 3:3; Tiitos 3:5). Wixii Kirishtaan ah inay lumiyaan badbaadadiisa, waa in dib loo cusbooneysiiyaa. Batbalka ma bixiyo wax cadeyn ah ee in dhalashada cusub lkagaa qaadi karo.
(d) Ruuxa Quduuska ayaa dhax joogo dhammaan aaminayaasha (Yooxanaa 14:17; Rooma 8:9) iyo masiixiyiinta ee dhammaan aaminayaasha ee Jirka Masiixi (1 Korintos 12:13). Aamiha noqonayo mid aan badbaado aheyn, waa inuu noqdaa to be "aanan dhax joogin" oo ka gooniyoobay Jirka Ciise.
(e) Yooxanaa 3:15 wuxuu sheegay IN cid walboo aaminsan Ciise Masiixi wuxuul "helayaa nolol daa’im ah." Haddii aad aaminsantahay Masiixi maanta oo aad leedahay nolol waarta, laakin lumiyaa bari, kadib marmnaba ma noqon "daa’in" marnaba. Sidaas darteed haddii aad lumisid badbaadadaada, balamaha nolosha daa’inka ah ee ku jirto Baybalka qalad ayay noqoneysaa.
(f) Gabagabada murunka ugu badan, waxay illa tahay in Baybalka u dhahaynk si wanaagsan nafsadooda, “Waxaan iga dhaadhacsan in midkood dhimasho ama nolol, midkood malaa’igta ama sheydaamada, mana ahan hadeer ama mustaqbalka, ma ahan awood walba midkood, ma ahan midkood dhirir ama hoos, ama wax kale ee ku jira dhammaan uunka, waxaa usuurtogaleyso inay ka go’aan jaceylka Illaah ee ay ku jirto Ciise Masiixi Illaaheena." Xasuuso isla Illaaha ee ku badbaadiyay ayaa ah isla Illaah ku illaalinayo. Markii aan badbaadno mar walba badbaado ayaan nahay. Badbaadadeena inta badan waa badbaado daa’im ah!